भारतलाई ठूलो संकट, अर्को क्षेत्रबाट घुस्यो चिनियाँ सैनिक
गृहपृष्ठ » अन्तर्राष्ट्रिय » भारतलाई ठूलो संकट, अर्को क्षेत्रबाट घुस्यो चिनियाँ सैनिक
काठमाडौं । चीन पुनः भारतमा घुसेको छ । पूर्वी लद्दाखमा बढ्दो उत्कर्षको बिच चीनले उत्तराखण्डको बाराहोटी क्षेत्रमा एक उत्तेजक कदम उठाएको हो ।
चिनियाँ सेनाका १०० भन्दा बढी सैनिकहरु सीमा पार गरी भारतमा प्रवेश गरे र धेरै पूर्वाधारहरु ध्वस्त पारेर फर्केका हुन् । अधिकारीहरुका अनुसार त्यहाँबाट फिर्ता हुनु अघि चिनियाँ सेनाले एउटा पुलमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ ।
उत्तराखण्डको त्यस क्षेत्रमा चीनको घुसपैठले पूर्वी लद्दाखमा सेना फिर्ता गर्ने सकारात्मक प्रगतिको बीचमा खतरनाक घन्टी बजाएको छ । बाराहोटी क्षेत्रमा विगतमा चिनियाँ पक्षबाट घुसपैठ भैसकेको छ ।
सेप्टेम्बर २०१८ मा पनि त्यहाँ चिनियाँ सैनिकहरु ३ पटक घुसपैठ भएको खबर आएको थियो । सन् १९५४ मा पहिलो क्षेत्र थियो, जहाँ चिनियाँ सैनिकहरु घुसेका थिए र पछि त्यहाँ अन्य क्षेत्रहरु कब्जा गर्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यसपछि १९६२ को लडाँई लडेको थियो ।
अगस्त ३० मा घटेको घटनाले आमनेसामने हुन सकेन किनकि पीएलए सैनिकहरु भारतीय सैनिकहरुको सामना नगरेर फर्किएका थिए । सुरक्षा स्रोतहरूले ईटीलाई भने कि ५५ घोडा र १०० भन्दा बढी सैनिकहरु टुन जून ला पास पार गरी ५ किलोमिटर भन्दा बढी भारतीय क्षेत्र प्रवेश गरेका थिए ।
पछिल्ला केहि बर्षहरुमा, त्यस क्षेत्रमा पीएलए पक्ष बाट मात्र घुसपैठको सामान्य घटनाहरु भएका छन् । पछिल्लो पटक यो जुलाईमा भएको थियो, त्यसपछि नयाँ दिल्लीको चिन्ता बढेको थियो । पूर्वी लद्दाखमा चीनसंग तनाव पहिले देखि नै रहेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् कि चिनियाँ सैनिकहरु, सेनाका घोडाहरु सहित, टुन जुन ला पास पार गरी बाराहोटी नजिकैको चारागाहमा पुगेका थिए । मानिन्छ कि, चिनियाँ सैनिकहरुको यो समूहको बारेमा तीन घण्टाको लागि बसेका थिए । चूंकि यो क्षेत्र एक सैन्यविहीन क्षेत्र हो ९जहाँ त्यहाँ कुनै सैनिक छैन०, पीएलए सैनिकहरुको यति धेरै संख्यामा उपस्थिति सुरक्षा प्रतिष्ठानहरुको लागी चिन्ताको बिषय हो ।
स्रोतले भन्यो कि स्थानीय जनताले यस घुसपैठको बारेमा जानकारी दिए, त्यसपछि आईटीबीपी र सेनाको टोली तुरुन्तै त्यहाँ पुगेर यो पुष्टि गर्यो । भारतीय गश्तीको आगमन भन्दा पहिले, चिनियाँ सैनिकहरु क्षेत्र छोडेर फर्किएका थिए ।
बाराहोटी शिखर नन्दा देवी राष्ट्रिय निकुञ्ज को उत्तरमा अवस्थित छ र सिपाहीहरु कार बाट पुग्न अन्तिम बिन्दुबाट त्यो बाटो हिड्छन् । यो शिखर जोशीमठ संग जोडिएको छ, जहाँ भारतीय सेना र आईटीबीपी शिविरहरु कुनै पनि प्रमुख चिनियाँ अपरेशन लाई विफल पार्न अलर्ट मोड मा रहन्छन् ।
आईटीबीपी उत्तराखण्डमा लगभग ३५० किलोमिटर लामो सीमा को निगरानी गर्दछ, जो एलएसीको हिस्सा हो । भारतको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने कि एलएसी मा भारत र चीनबीच धारणा मा एक फरक छ, जसको कारण यस्ता घटनाहरु प्रायः हुन्छन् ।
जब सम्पर्क गरियो, आईटीबीपी प्रवक्ताले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् कि सो क्षेत्र मा पीएलए सैनिकहरु को गतिविधिहरु पछिल्ला केहि महिनाहरुमा बढेको छ ।
अर्का एक अधिकारीले भने, ‘यसअघि बाराहोटी क्षेत्रमा पीएलएले धेरै घुसपैठको प्रयास गरेको थियो । अब केन्द्रीय क्षेत्रमा अतिरिक्त सेना परिचालन गरिएको छ ।
गुप्तचर एजेन्सीहरुले बाराहोटी नजिकैको एयरबेसमा चिनियाँ गतिविधिहरुको जानकारी दिएका छन् । त्यहाँ यो खबर पनि छ कि गत वर्ष लद्दाख मा सीमा संघर्ष पछि, पीएलएले एलएसीमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनलाई भरोसा गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
अध्यक्ष ओलीलाई धोका दिने मुडमा पूर्वमाओवादी नेता साह, के गर्दैछन् ?
भारतको यसरी भयो अन्तराष्ट्रिय बेइज्जती
जापानकी राजकुमारीले गरिन् कलेजको प्रेमीसँग विहे, साधारण व्यक्तिसँगको विहेले गुम्यो शाही पदवी
नेपालले पाठ सिक्नैपर्ने : सुडानमा अचानक सैन्य ‘कू’, संकटकाल घोषणा गरेर सरकार विघटन
यी हुन् विश्वका सर्वाधिक १० ठूला राजनीतिक दल (सदस्य संख्यासहित)
अचानक सेनाद्धारा प्रधानमन्त्री नजरबन्दमा, मन्त्रीहरु पक्राउ
उत्तरपूर्वी ताइवानमा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का
अमेरिकाले टाउकोको मूल्य ६० करोड नेपाली रुपैयाँ तोकेको तस्कर समातियो
अमेरिकामा अति सामान्य दम्पतीमाथि राष्ट्रद्रोहको अभियोग लाग्दा दुनियाँ चकित, कारण भने यस्तो छ
भारतबाट चीन जानु परे हवाई भाडा साढे ६ लाख
अमेरिकामा भयानक गोलाबारी : ७ जनाको मृत्यु, नेपालीको अवस्था के छ ?
अमेरिकी हवाई हमलामा अल कायदाका नेता अब्दुल हमिद अल मतर मारिएका